GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
N’isiokwu nke abụọ n’Ụlọ Nche a, Gail kwuru na ya echeghị na ọnwụ Rob di ya ga-apụli ya apụ n’obi. Ma, ọ na-atụ anya ịhụ ya ọzọ n’ụwa ọhụrụ Chineke kwere nkwa ya. Gail sịrị: “Amaokwu Baịbụl kacha amasị m bụ Mkpughe 21:3, 4.” Ebe ahụ sịrị: “Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo.”
Gail kwuru, sị: “Ọ bụ nkwa a na-akasi m obi. Ndị m na-emetere ebere ugbu a bụ ndị na-amaghị na ha nwere ike ịhụ onye nwụnahụrụ ha ọzọ.” Gail na-eme ihe gosiri na o kwenyesiri ike na nkwa a Chineke kwere ga-emezu. Ọ na-aga ozi ọma oge niile, na-akọrọ ndị mmadụ na Chineke kwere nkwa na “ọnwụ agaghị adị ọzọ.”
Obi siri Job ike na ọ ga-adị ndụ ọzọ
I nwere ike ịna-eche ma ihe a ọ̀ ga-ekwekwa omume. Ma, legodị ihe mere otu nwoke a na-akpọ Job. Ezigbo ọrịa jidere ya n’otu oge. (Job 2:7) Ọ bụ eziokwu na o weere na ọ ga-akara ya mma ịnwụ, ma o nwere okwukwe na ya nwụọ, Chineke ga-akpọliteli ya n’ọnwụ, ya adịrịkwa ndụ ọzọ n’ụwa a. Ọ bụ ya mere o ji kwuo, sị: “A sị nnọọ na ị ga-ezobe m na Shiol . . . Ị ga-akpọ òkù, mụ onwe m ga-azakwa gị. N’ihi na agụụ ọrụ aka gị ga-agụsi gị ike.” (Job 14:13, 15) Obi siri Job ike na ya nwụọ, ọ ga-agụsi Chineke agụụ ike ịhụ ya ọzọ na ịkpọlite ya n’ọnwụ.
N’oge na-adịghị anya, mgbe Chineke ga-eme ka ụwa a ghọọ paradaịs, ọ ga-akpọlite ma Job ma ọtụtụ ndị ọzọ nwụrụ anwụ. (Luk 23:42, 43) Baịbụl kwuru n’akwụkwọ Ọrụ Ndịozi 24:15 na “a gaje inwe mbilite n’ọnwụ.” Jizọs gwakwara anyị, sị: “Ka ihe a ghara iju unu anya, n’ihi na oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu ya, wee pụta.” (Jọn 5:28, 29) Job ga-eso ná ndị Chineke ga-emere ihe a. Ọ ga-enweghachikwa “ike okorobịa” ya, ‘ahụ́ ya adịkwa ọhụrụ karịa otú ọ dị n’oge ọ bụ nwata’ ruo mgbe ebighị ebi. (Job 33:24, 25) Ọ bụkwa otu ihe ahụ ka a ga-emere ndị niile ga-egosi na ha nwere okwukwe na Chineke ga-emezu nkwa o kwere ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ.
Ọ bụrụ na o nweela onye nwụnahụrụ gị, ime ihe ndị anyị kwuru n’akwụkwọ a nwere ike ọ gaghị eme ka ị kwụsị iru uju kpamkpam. Ma, ịtụgharị uche ná nkwa ndị Chineke kwere na Baịbụl nwere ike ime ka i nwee olileanya na ihe ga-aka mma, meekwa ka i nwee ike ị ga-eji na-eme ihe ndị ọzọ i kwesịrị ime.—1 Ndị Tesalonaịka 4:13.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmatakwu ihe ga-enyere gị aka idi ọnwụ onye nwụnahụrụ gị, ma ọ bụkwanụ na ị ga-achọ ịmata ihe mere Chineke ji kwe ka ihe ọjọọ na ahụhụ dịrị, biko, gaa n’adres Ịntanet anyị bụ́ jw.org/ig. Ị ga-ahụ ihe Baịbụl kwuru ga-enyere gị aka ma kasie gị obi.